Ogige Ubi, Ji achọ ma zuru ike | Bezzia
Maria onyekwere | 04/06/2021 18:00 | .Chọ Mma
Isi iyi abụrụwo n’akụkọ ihe mere eme a isi ibe ke ubi. Ihe eji achọ mma ọ bụghị naanị na-agbakwunye ha agwa, kamakwa na-enye aka n'ịmepụta ọnọdụ dị jụụ ma na-atụgharị uche maka ntamu nke mmiri.
N’oge udu mmiri dika nke anyi, olulu mmiri n’ubi bu kwa ngwa oru iji weta ohuru n’ebe a. Ihe mere na-achọ dobe isi iyi n’ubi gịya mere, ha dị ọtụtụ. Dị ka ọtụtụ ihe ndị ị ga-elebara anya ịhọrọ otu.
1 Ihe mbu iji chebara ya echiche
2 Dị isi iyi nke ubi
2.1 Site n'ụdị ya / ihe ya
2.2 Maka ọrụ ya
Ihe mbu iji chebara ya echiche
Will gaghị atụ anya ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịmalite ịchọta isi iyi ubi n'atụleghị ebe ịchọrọ itinye ya na ụdị njirimara ị na-achọ n'ime ya. Ohere dị n’ahịa enweghị njedebe ma juo onwe gi ajuju ole na ole tupu i bido ime ga - eme ka ichoputa gi.
Ebee ka ị ga-edebe ya? N'etiti ogige ahụ ka ọ bụ megide mgbidi?
Na-ahọrọ isi iyi ọrụ ma ọ bụ ụdị eji arụ ọrụ?
Kedu ụdị ị na-achọ ogige gị? Omuma, dịkọrọ ndụ, Mediterranean, minimalist, eke ...
Olu nke isi iyi ahụ ọ dị gị mkpa? Ma ọnụọgụ mmiri na ịdị elu nke ugbo mmiri ga-emetụta oke mkpọtụ sitere na isi mmalite.
Nwere ike ijikọ ya na mmiri pọmpụ? You dị njikere ịrụ ọrụ ma ọ bụ na ịchọrọ iji ụdị ọrụ ndị ọzọ?
Za ajụjụ ndị a ga - enyere gị aka ịhazigharị ihe ụdị dabara adaba kachasị mma maka ubi gị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike inyocha ọchụchọ gị wee rute isi iyi ubi ndị na-amasị gị ngwa ngwa. Mgbe ahụ, n'etiti ezi ohere, ma imepụta na mmefu ego ga-enyere gị aka ime mkpebi ikpeazụ.
Dị isi iyi nke ubi
Ọ bụrụ n’ịgbalịrị ịza ajụjụ ndị a, ọ gaghị esiri gị ike ịkọ nkọ na e nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ileba anya iji kọwaa isi iyi ubi dị iche iche. Otú ọ dị, taa, anyị ga-elekwasị anya naanị na abụọ, nke anyị na-atụle nke kachasị mkpa: arụmọrụ na ihe.
Site n'ụdị ya / ihe ya
Ihe eji eme mmiri nke ubi chọpụta ụdị gị. Imirikiti isi mmiri ndị kpochapụla kpochapụ bụ nke okwute, yana nke ndị Mediterranean ụdị ọ bụ na ọ na-adịkarị na ha na-eweta ihe seramiiki.
Okwute mmiri: E jiriwo isi iyi okike mee ihe n’akụkọ ihe mere eme dị ka ihe dị mkpa n’ogige ahụ. Iberibe iberibe ihe ndị ahụ a kpụrụ akpụ na nke a kpụrụ akpụ ejiriwo ọdịnala dịrị n'etiti ogige ndị mara mma. Ndị nwere efere ma ọ bụ ite mmiri, n'aka nke ha, ejiriwo omenala chọọ mgbidi nke nnukwu ụlọ ndị dị ná mba ahụ mma. Ihe ejiri mara ha abuo.
Okpuru mmiri: Typedị isi iyi a na-abụkarị nke simenti ma jiri taịl chọọ ya mma. N’omenala Arab ha na-eweta ụdị dị iche iche na motifik mara mma; Ndị a bụ isi mmalite anyị na-ahụkarị na ndịda Spain. Agbanyeghị, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ụdị mpempe akwụkwọ ndị ọzọ sitere na taịl, mkpụrụ akwụkwọ nwere ọdịdị mara mma nke oge a. Kedu? Iji akara kwụ ọtọ na taịl nile na ụda ojii na ọcha.
Dara isi: Ka oge na-aga, isi iyi ndị nwere ọla na-enweta patina mara mma nke na-enye ha agwa. Na igwe ị nwere ike ịchọta isi mmiri ndị mepere emepe nwere ọmarịcha mma, mana ndị ọzọ mepụtara site na mpempe akwụkwọ dị mfe nke na-enweta ọmarịcha ọgbara ọhụrụ ma dabara nke ọma na obere osisi ma ọ bụ nke sitere na mmụọ.
Maka ọrụ ya
Akụkụ dị oke mkpa iji chebara echiche bụ ụdị ọrụ nke isi iyi ahụ. Otutu n’ime ha nwere igwe eletrik na ị nwere ike ijikọ na grid ma ọ bụ na-agba ọsọ site na batrị ndị ọzọ ma ọ bụ ogwe igwe. Buru n'uche na dabere na ebe ịchọrọ ịtọba isi iyi ahụ, ijikọ ya na netwọk eletrik nwere ike ịchọ ọrụ ndị ọzọ ma bulie ego ahụ.
Kedu ụdị isi iyi ị ga-achọ iji chọọ ogige gị mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ogige isi iyi, ji achọ na-atụrụ ndụ
Ihe ị ga-eri iji belata PMS